Unoda kufamba mugungwa here? Hungu, kufanana nechokwadi. Ongorora iyo Chandipur Unique Beach Tour. Negungwa rekudzoka kwemahombekombe anenge 5 km mumhepo yakadzika uye ichifambira kumahombekombe panguva yemvura yakawanda zuva rega rega, Chandipur Beach at Odisha inopa maonero akasiyana-siyana uye anofadza chaizvo. Izvi zvinowanzoitika kune vanofamba mambakwedza vanofukidza nzvimbo ye makiromiti akawedzerwa, nyore nyore pamwe chete nekushamiswa kukuru.
Ichi chiitiko chezvisikwa chinoshanyira vanhu vazhinji muBhangi kuti vawane zvishoma zvekusemesa kusingaoneki kwezviitiko, pamberi peziso. Kurindira gungwa kunopera pamberi pemaziso ako uye zvino kucherechedza kudzoka kwayo inzvimbo isingawanzoitiki. Uye kuwedzera zvakanyanya kune ichi chivande uye kutsvaga kwemvura, Casuarina miti uye creeper mhepo matumato zvinoita kunge ichidzungaira pamhanzi unonakidza. Gungwa iri pedyo zvikuru nedzimwe nzvimbo dzevashanyi dzinosanganisira Remuna, Panchalingeswar, Aradi uye Chandaneswar.
Gungwa ndiro biodiverse muhupenyu hwegungwa. Chimwe chinokambaira chebvu tsvuku ndeyekuonekwa. Iyo yakashambidzwa yakaita gungwa yakasvibirira maruva akasiyana-siyana egungwa mabhandi uye pfuma ye aqua kune muchengeti anochera. Vamwe vagari vanonakidzwa nebhazikoro apo gungwa racho rinodzoka richibva kune mvura yakadzika shure. Kazhinji mafungu akabatwa nevatariri vakashamisika. Mhepo inopedzana maererano neMwedzi, iyo inoramba ichishandura, asi vanhu vomunharaunda vanonyatsoziva nekugadzirisa.
Nzvimbo ine rugare uye ine rugare ye Chandipur inokurudzira mushanyi. Chandipur gungwa rakanaka kuti whisk kure kuti mumwe munhu akakosha, nekuda kwekuvhenekera kwemavhenekeri kwemanheru.